मनाेरन्जन Archives - Page 80 of 117 - Purbeli News
शाहरुख सँग आज के छैन पैसा,प्रतिष्ठा र प्रसिद्धि ? उनी बलिउडमा सफल मात्रै होइन, संघर्षले आज बलिउडमा जुन स्थान बनाए जो-कोहिले सोच्न सम्म सक्ने कुरा होइन। शाहरुखको उमेर ढल्किदैं छ।चढ्दो उमेरसँगै मानिसका सबैकुरा विस्तारै हराउँदै जान्छ। सुन्दरता,चर्चा,क्षमता यो कसैले पनि रोक्न-छेक्न सक्ने कुरा होइन। उमेर चढे पनि शाहरुखको चर्चा भने कम भएको छैन र उ...
एजेन्सी । बलिउड निर्देशक संजय लीला भंसालीको चलचित्र 'पद्मावती' लाई लिएर विवाद चर्किएको छ । राजस्थानको चित्तौड़गडमा सुटिङ भइरहेको चलचित्रको विषयलाई लिएर विरोध प्रदर्शन भएको हो । अहिले करणी सेनाका कार्यकर्ता सडमा उत्रिएका हुन् । प्रदर्शनकारीले रानी पद्मावतीलाई चलचित्रमा बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । पद्मावतीको रूपमा दीपिकालाई नाच-गान गरेक...
पर्दामा जनगायक रामेशको कथा
काठमाडौं / आधा शताब्दिदेखि गीत संगीत मार्फत जनता जगाउँदै आएका जनगायक रामेश श्रेष्ठको सांगीतिक यात्रा बारे निर्माण भएको डकुमेन्ट्री फिल्म ‘डढेलोभित्रका सतिसाल’ काठमाडौंमा जारी फिल्म साउथएसिया २०१७ मा विशेष प्रदर्शन गरिएको छ । डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ र प्रणय लिम्बूले निर्देशन गरेको सो फिल्म हेरेर दर्शकहरु भावुक बने । ९४ मिनेट लामो फिल्मलाई द...
सन्दिप क्षेत्री र सुशील नेपाल संग सेल्फी खिच्ने को हुन ? हेर्नुस् (भिडियो सहित)
कार्तिक / हरेक दिनजसो नेपाली साङितिक बजारमा उत्कृष्ट गीतको सर्बोत्कृष्ट म्युजिक भिडियोहरु सार्बजनिक हुने क्रम निकै बढेको छ । यस्तै ‘सेल्फी क्विन’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । ‘फलो मि’ एल्बममा समाबेश उक्त गीतलाई रबिना थापा र अनिल सिंहले गाएका छन । गीतमा चर्चित प्रस्तोता नरेश भट्टराईको शब्द समाबेश छ । गायक अनिल सिंहकै संगीत रहेको...